Sheekh Aadan Sunne oo maanta xoriyaddiisi dib u helay kadib saddex sano | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA Sheekh Aadan Sunne oo maanta xoriyaddiisi dib u helay kadib saddex sano
Sheekh Aadan Sunne oo maanta xoriyaddiisi dib u helay kadib saddex sano
Maxkamadda sarre ee Somaliland ayaa maanta dib ugu soo celisay xoriyadiisii Sheekh Aadan Cabdiraxmaan Warsame ‘Aadan Sunne’ oo dhamaadkii 2017-ka xabsiga la dhigay.
Sheekh Aadan Sunne ayaa maanta waxay maxkamadu la sii deysay dhalinyaro la xirneyd oo hore ay maxkamadda gobolka Maroodi-jeex ugu xukuntay xukuno kala duwan oo u dhaxeeyay sanad iyo sagaal sanno.
Aadan Sunne ayaa sidoo kale waxay Maxkamada gobolku hore ugu xukuntay muddo dhan shan sanno oo xarig ah, iyadoo xiligaasi ay Ciidamada Booliska Somaliland ku eedeynayeen inuu waddo falal amniga lidi ku ah.
Dhalinyarada iyo Sheekh Aadan Sunne ayaa muddo sannado ah u xirnaa eedeymo la xidhiidha kicin dadweyne iyo xaalad abuur ay ka abaabulayeen Somaliland, taasi oo ay maanta maxkamdu amartay in la sii daayo.
Sheekh Aadan Sunne iyo dhalinyartii hore loola xidhay ee maanta dib u helay xoriyadoodii, ayey maxkamadu ku sheegtay sii deyntooda in lagu waayay wax dambi ah, midaasi oo ka dhigeysa in xabsiga ugu jireen fal dambiyeed aan jirin oo ay horey ugu xukuntay maxkamad.
Somaliland ayaa dhowr jeer oo hore sidan xabsiga u dhigtay Sheekh Aadan Sunne, balse mudada uu xirnaa ee sanadaha ah ayaa ka dhigaysa xadhigii ugu dheeraa ee ay xirto xukuumada Somaliland.
Previous articleSiciid Fadhaye Oo Deg Deg Uga duulay Muqdisho Kadib Xabsi Lagu hayey & Dilkii Almaas Uu…
Next articleWeerarka afka ee lagu haayo Cabdiraxmaan ma diin u hiilin baa mise waa dano siyaasadeed?
Dowladda Soomaaliya oo Ciidamo Itoobiyaan ah geysay Magaalada Dhuusamareeb
Maxay ka wada hadleen Qoor Qoor & Kheyre, Xog xasaasi laga helay?
XOG: Mareykanka oo bishan hakiyey bixinta mushaarka ciidamada DANAB kaddib sarkaal ay xirtay dowladda
DAAWO: Dowlada Indonesia oo Qunsul sharafeed umgacowday Nin Somali ah.
Erdogan oo ka digay qorshe ka dhan ah Muslimiinta oo ay wadaan ‘qolooyin’
Xaaladda Kismaayo Oo Degan & Wali Khatar Amni Oo Jirta Magaalada
Boqor Cismaan Buurmadow oo Fariin Adag Udiray Madaxweyne Muuse Biixi
BiG News:Dowlada Somalia ‘oo xirtay shabakad sirdoon oo ay leeyihiin Imaaraadka’
Baarlamaanka Soomaaliya oo ansixiyay Xeerka astaynta kuraasta golaha shacabka.